मोटोपना हटाएर स्लिम बन्न चाहानुहुन्छ ? यि उपाय अपनाउनुहोस् – Gulmiews
मोटोपना हटाएर स्लिम बन्न चाहानुहुन्छ ? यि उपाय अपनाउनुहोस्
No comments	दुब्ला र ख्याउटे मानिसलाई मोटाउन भित्रैदेखि इच्छा जाग्छ । तर मोटा मानिसलाई मोटो पनाले भित्रैदेखि दुब्ल्याउन मन लाग्छ । कुरा जे भएपनी विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभर ३ दशमलव ९ अर्ब मानिसहरु मोटोपनबाट पिडित छन् । जहाँकी पातलो मानिसहरु मोटाको तुलनामा कम छन् । मोटोपन अक्सर नियमित खाना नखानाले , व्यायाम नगर्नाले बढ्ने गर्दछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसले मोटोपना पुरै नियन्त्रण गर्न नसकेपनि केही हदसम्म घटाउने तरिका औल्याएको छ । जसमध्ये मुख्य रुपमा हरियो साग सब्जी र फलफूल सेवनलाइृ लिइएको छ । फलफूल र हरियो साग सब्जीमा मिनिरल ,भिटामिन र पानीको मात्रामा धेरै हुनाले यसरले शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ । त्यस्तै दोश्रो नम्बरमा क्रैश डाइट नखाने कुरालाई उसले औल्याएको छ ।
यस्ता बिमारीले प्राय चिसो पानीले नुहाउने लत नै बसाल्नुपर्छ । जसकार कारण तिघ्रा र कम्मरको बोसोलाई सक्रिय गरेर मेटाबॉलिज्म बढाउछ । क्रैश डाइटले वजन छिटो घटाउन मद्दत । वजन घटाउनकोलागि नियमित ब्याम गर्नु पर्दछ ।
नियमित ब्यामले उर्जाको खपत बढाउनुको साथै शरीरमा रहेको बोसो घटाउछ । त्यस्तै ड्राई फूड कम खाने गर्नु पर्छ । तर भोजन भने नियमित नै गर्नुपर्छ । निन्द्रा प्रशस्त हुनुपर्छ । पर्याप्त निन्द्राभएन भने ज्यादा भोकको आभास दिलाउछ । जसले मोटाउन सहयोग गर्छ । यि उपाय अपनाउनुभयो भने तपाइको मोटोपना केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । -एजेन्सी